शुक्रबार, साउन १, २०७८ बागेश्वरी पोस्ट
नेपालगन्ज । सिभिल बैंकले सर्वाधिक ब्याज दिनेगरी दुईवटा नयाँ बचत खाता योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले ‘सुपर प्रिमियम बचत खाता’ र ‘खुत्रुके खाता ९रिकरिङ डिपोजिट०’ योजना आज शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो ।
न्यूनतम मौज्दात २५ हजार रूपैयाँ ‘सुपर प्रिमियम बचत खाता’मा बैंकले वार्षिक ६ दशमलव ०१ प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्ने छ । साथै मेटलाइफसँगको सहकार्यमा बैंकले ६ वटा घातक रोगहरूको दुई लाख रूपैयाँसम्मको निःशुल्क बीमा समेत यो योजनामा उपलब्ध गराएको छ ।
बीमाअन्तर्गत जोखिम वहन हुने रोग मेजर क्यान्सर, मेजर स्ट्रोक्स, पहिलो हृदयघात, पल्मनरी हाइपरटेन्सन, हार्ट भल्भ सर्जरी तथा कोरोनरी आर्टेरी डिजिज छन् । उल्लेखित रोग लागेको खण्डमा बीमामार्फत निःशुल्क औषोधपचारको सुविधा प्राप्त गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । यो योजनामा बैंकले प्रदान गर्ने मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, एटीएम कार्ड, एसएमएस बैंकिङ लगायत सेवा पनि निःशुल्क हुने पनि जनाएको छ ।
त्यसैगरी ‘खुत्रुके खाता (रिकरिङ डिपोजिट)मा अन्य बैंकहरूले प्रदान गरिरहेको रिकरिङ डिपोजिटहरूमाजस्तो शर्त तथा बन्देजहरू नराखी बचत गर्न चाहने ग्राहकले दुई वर्षदेखि १० वर्षसम्मको अवधि चयन गर्न पाउने छन् । मासिक न्यूनतम ५०० रूपैयाँदेखि माथि जति पनि रकम सञ्चय गर्दै जान सकिने छ ।
कुनै महिनामा कुनै कारणवश जम्मा गर्न असमर्थ भएमा पनि कुनै किसिमको पेनाल्टी नतिरी आफूले निर्धारण गरेको समयसीमापश्चात साँवा तथा ब्याजको एकमुष्ठ भुक्तानी पाउने बैंकले जनाएको छ । अझ यस खातामा सुपर प्रिमियम बचत खातामा भन्दा १ प्रतिशत थप ब्याज प्राप्त हुने पनि बैंकले जानकारी दिएको छ ।
केही कारण बचत अवधि पूरा नुहँदै रकम आवश्यक भएमा सञ्चित रकमको ७० प्रतिशतसम्म बिनाधितो ऋण प्रदान गरिने पनि बैंकले जनाएको छ । ऋण निकाल्दा कुनै झण्झट नहुने बैंकको भनाइ छ ।
यसको अतिरिक्त बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा पनि ८ दशमलव ७१ प्रतिशतको सर्वाधिक ब्याजदर पनि प्रदान गर्दै आइरहेको जनाएको छ । विद्यमान कोरोना संक्रमणबाट सिर्जित कठिन अवस्थामा अन्य वित्तीय संस्थाहरूद्वारा निक्षेपमा प्रदान गरिएको ब्याजदरको तुलनामा ग्राहकको मेहनतको कमाइलाई कदर गर्दै आकर्षक ब्याज प्रदान गरिएको बैंकको भनाइ छ । यो योजनाले ग्राहक लाभान्वित हुने विश्वास बैंकले गरेको छ ।
बैैंकका प्रमुख डिपोजिट तथा ट्रान्जेक्सन बैंकिङ भोलाबहादुर विष्टका अनुसार जेठ मसान्तसम्म निक्षेपतर्फ रू. २८.७९ अर्ब ९४७.८८ ५० र कर्जा तर्फ रू. २९.७६ अर्ब (५५.२८%) वृद्धि गर्न बैंक सफल भएको छ । सिभिल बैंकको वृद्धि प्रतिशत अन्य वाणिज्य बैंकहरूको वृद्धि प्रतिशतको तुलनामा सबैभन्दा बढी रहेको विष्टको दाबी छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १, २०७८, २१:४३:००